Icelandic Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(543 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ... Mitemo yekubhejera pamhepo muIceland inorambidza basa revashandisi mumunda wekubhejera. Kubhejera kunorambidzwa munyika, zvese mumakasi-akavakirwa macasino uye paInternet. Kusiyanisa kunewo masangano anotungamirirwa neYunivhesiti yeIceland Lottery. Nyaya yekumisikidza rudzi urwu rwekubhejera yakafungisisa kakawanda neHurumende. Zvisinei, hapana shanduko dzakanaka dzinotarisirwa kuti vatambi vafambidzane. Kunyangwe ichifanira kucherechedzwa kuti kuwanikwa kwenzvimbo dzemuno pamhepo kubhejera kunobatsira kubvisa nekukurumidza uye zvine hungwaru kubva kumatambudziko emari enyika. Zvichakadaro, vatambi uye kubheja pamhepo kune vateveri vemitambo muIceland vanowana maburi uye vanoshandisa masevhisi emakambani ekunze.
Rwokutanga rweZimbabwe 10 Icelandic Online Casino Sites
Kubva muna Ndira wezvino 2017 Kubhejera hakubvumirwe muIceland, kunze kwemalotari uye zvimwe zviitiko zvekubhejera zvakatangwa nemasangano asingabatsiri. Iyo yega yemvumo manejimendi muviri weiyo yekubhejera chiitiko iUniversity yeIceland Lottery. Sangano iri rine akati wandei emuchina wekubhejera, wakanyoreswa zviri pamutemo muna 1994, padyo nemabhawa nenzvimbo dzemagetsi.
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva Iceland
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuIceland, uye dzichipa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji. Iwe unogona zvakare kuverenga edu ongororo yepamhepo kasino masosi, kuti uzive akanakisa epasirositi epamhepo, mabhonasi uye sarudzo dzekubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuIceland.
Zvinoenderana neongororo ichangoburwa KeyToCasino saiti, mutambo uri muInternet kasino hauwanikwe kune vanopfuura makumi mashanu muzana yevagari vepasi rose mitemo yenyika dzavo. Zvakazoitika kuti kuwanikwa kwekubhejera paInternet kunosiyana zvakanyanya kubva kumatunhu kuenda kunharaunda. Nepo mune dzimwe nyika zvakarambidza marudzi ese emakinisheni epamhepo mune zvimwe zvinorambidzwa zvinoshanda chete kune yemuno indasitiri yekubhejera uye haishande kumakambani ekunze.
Tsvagiridzo iyi yakaitwa nekutora nekudzidza iyo mitemo yenyika-yakavakirwa uye yepamhepo makasino munyika makumi maviri nemaviri pasi rose uye kudzidza kweanowana ruzivo pamitauro 225 dzakasiyana. Masosi akasarudzwa kuvimba, senge nzvimbo dzemasangano ehurumende uye venhau vanonyanya kutaurwa mudunhu iri. Nekudaro, iyo ongororo yakafukidza 46% yenyika, uye 95% yevagari.
Nezve nyika-based casinos tsvagurudzo yakaratidza kuti ivo vanoganhurwa kana kutorambidzwa munyika makumi manomwe nenomwe, nepo mune gumi nemashanu nyika mamiriro ekubhejera ari pamutemo zvachose. Asi nemakasino epamhepo mamiriro acho akasiyana:
Kubhejera kunorambidzwa munyika dze39.
32 inoti inorambidza kubvumidzwa kwebasa revashandi vemunharaunda dzekambani dzepaIndaneti, asi huwandu hwemakasinisitiri mune mamwe masimba hausi.
61 nyika dzinobvumidza kubhejera paInternet, asi muhafu yadzo mutemo unoshanda chete kumakambani emuno. Sezviri mundima iri pamusoro, mutemo wenyika idzi haugadzise marezinesi mune mamwe masimba.
93 zvinyorwa hazvibvumirwi, asi kwete chepainternet online casino.
Nenzira yakawanda, zvibvumirano zvekubhejera paIndaneti mune imwe nhengo kana imwe zviripo munyika dze132, iyo inoshandisa 56% yehuwandu hwevanhu.
Saka chii chakachengeterwa vanhuwo zvavo, avo vafunga kuyedza mhanza yavo pawebhu? Vatambi vari munyika makumi maviri neshanu vanofanirwa kungwarira zvakanyanya uye kuziva zvavanoita, nekuti ivo vanosangana nemhosva yemhosva yekutamba pamhepo. Munyika gumi neshanu, inogona kupa chirango chekutonga, uye vagari venyika makumi mapfumbamwe nemaviri vanogona kutamba vakasununguka - kwavari hakuna njodzi.
Enderera mberi nekutsvagurudza vaongorori vakadzidza zvibvumirano pakupihwa kwemasevhisi 655 online kasino yevepo nyika dzevagari dzinorambidzwa kupa masevhisi. Nyika dzeTroika dzinotungamira kurambidzwa kwemitambo yevagari vemo ndeinotevera: United States (72% inorambidza online macasino), France (70%), Israel (54%). Nyika nhatu dzepamusoro dzine chikamu chakadzika kwazvo chemarambidzo chakaenzana neIceland (7%), New Zealand neAustralia.
Kuti unzwisise, ndeapi mafungiro evane masimba kune nyika-yakanangana nekubhejera pamhepo uye makasino mazhinji epamhepo anorambidzwa kutamba vagari venyika ino, chidzidzo chakaita chiyero chenyika mazana maviri nemakumi maviri nenomwe pahwaro hwefungidziro dzekuwanikwa kwekubhejera ( Kubhejera Kuwanikwa Chikamu). Iwo akanyanya mamakisi pachiyero chekuyera uku chiuru chimwe chinobva mairi mazana mashanu akasungirwa muzana yezvese zviripo zvevagari vepamhepo pamakasino emunyika uye mamwe mazana mashanu maficha ehurongwa hwehurumende hwenzvimbo dzapasirese uye online makasino. Iyo yekupedzisira inosanganisira zvinhu zvakaita sematsotsi / manejimendi mutoro mutambi anowanikwa pakubheja kwepamhepo uye mari inochinjiswa pakati pekasino nemutambi
Pamusoro pechikwata ichi paive neChile, Andorra neVenezuela, vakahwina zvibodzwa mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe. Pazasi pechiyero chakagadziriswa France (960 poindi), Iran (412) uye US (407). Russia yakawana mapoinzi mazana matanhatu neshanu nematanhatu nematanhatu, ichiisa pamatanho zana nemakumi manomwe nenomwe pachinyorwa chenyika mazana maviri nemakumi maviri nemashanu.
0.1 Rwokutanga rweZimbabwe 10 Icelandic Online Casino Sites
1 Top 10 Best Europe Online dzokubhejera 2021:
2 Top 10 Best USA Online dzokubhejera 2021:
2.1 Kubhejera kuIceland
2.2 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva Iceland
yepasi 7 kasino bhonasi makodhi hapana dhipoziti